ne admin pane 21-06-11
Iko kusimuka kune matatu maitiro Akabatwa nedenda ra2020, kubva pahafu yepiri yegore, akasiyana maindasitiri mbishi uye ebetsero zvinhu zvakaratidza huwandu hwese kumusoro, uye mitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana yakarova kakawanda rekodhi dzakakwirira. Na2021, zvinoenderana nezvakakodzera mu ...
Iyo thermoelectric thermometer inoshandisa thermocouple sechinhu chekuyera tembiricha kuyera iyo thermoelectromotive simba inoenderana netembiricha uye kukosha kwetembiricha kunoratidzwa nemamita. Inoshandiswa zvakanyanya kuyera tembiricha iri muhuwandu -200 ℃ ~ 1300 ℃, uye unde ...
Pfungwa yakajairika yekutonhora kuchengetedza uye sarudzo nzira
Pfungwa yakajairika yekutonhora kutonhodza uye nzira yekusarudza Nekukurumidza kukura kwehupfumi hwenyika yangu, firiji michina yapinda munzvimbo dzakasiyana senge muzvitoro, zvekutengeserana, kurima nemaindasitiri, uye yakabatana zvakanyanya nehupenyu hwedu. Nekuda kwekukurumidza kukura kwe refrige ...
Chitsva chigadzirwa kuburitswa
Yedu kambani ichangobva kuburitswa nyowani izwi remagetsi kudzora bhokisi iri nyore kushanda, mutengo unofadza, uye mufaro wevatengi wakadzika. Iwo maratidziro ari seanotevera: Uyu mutungamiriri anoedzwa kudzora tembiricha yepakati uye yakadzika tembiricha tembiricha yekuchengetedza. Ine tembiricha ini ...
Nhanganyaya yechando yekuchengetera mwenje
Kutonhora kuchengetedza mwenje rudzi rwerambi rakatumidzwa muchimiro chekushandisa mwenje. Inonyanya kushandiswa mukutonhorera kutonhorera, kutonhora kutonhodza, furiza uye dzimwe nzvimbo uko tembiricha iri mukati yakadzikira, ine mwando, uye panodiwa kuchengetedzwa kwemagetsi uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Iine budiriro ...
Chii chinonzi Mutyairi Wekupisa uye unoshanda sei?
Chii chinonzi Mutyairi Wekupisa uye unoshanda sei? Mubvunzo: Chii chinonzi Mutyairi Wekupisa uye unoshanda sei? A: Yekushisa tembiricha mudziyo unoshandiswa kudzora tembiricha. Inoita izvi nekutanga kuyera tembiricha (maitiro anosiyana), yozoifananidza neyaunoda val ...
Zvemagetsi thermostat control musimboti
Iko kukurumidza kukura kwesainzi uye tekinoroji pasina mubvunzo kwakaunza zvakawanda zviri nyore kuhupenyu hwedu. Kugadzira uye kusimudzira kwakawanda michina michina ndeyekupona kwevanhu vedu. Zvino ini ndichatsanangura kwauri chishandiso chinonzi tembiricha controller. Seizvo zita rinoratidzira, t ...
Iyo chinzvimbo quo nekusimudzira maitiro efriji uye firiji indasitiri
Iyo inonzi "firiji" ndeyekutora imwe nzira yekuita kuti chimwe chinhu kana nzvimbo isvike tembiricha yakaderera pane yakatenderedza nharaunda mukati menguva yakati yenguva, uye panguva imwechete, inogona kuchengetedzwa mukati meyakafanirwa tembiricha. range. Izvi t ...
Nei chip chepasi rose chisipo? Pane zvinhu zvitatu zvakakosha shure kwayo, Zvakaitika kune vese kuungana
Kubva kota yechina ya2020, machipisi anga asipo, uye muna 2021, zvave zvakanyanya uye zvakanyanya. Haisi chete machipu emota asipo, asi machipisi ese atanga kunge asipo, uye iyo yese semiconductor indasitiri yakakanganiswa. Muchokwadi, sezvo chip ichi chakagadzirwa, iyo en ...
The rechi32 China Refrigeration Exhibition kwakaguma zvinobudirira Shanghai
Co-inotsigirwa neChina Kanzuru yeKusimudzira kweInternational Trade Beijing Bazi, China Refriji Sosaiti, China Refriji uye Mhepo-Inodzora Indasitiri Association, Shanghai Refriji Sosaiti neShanghai Refriji uye Mhepo-Inotangisa Indasitiri Association, iyo 32nd Internat ...
aquarium yedhijitari thermometer, thermostat tembiricha controller, otomatiki tembiricha kudzora, Incubator tembiricha controller, thermometer yedhijitari, digital thermostat controller,